TSY MAINTSY TONGANTSIKA ETO ALOHAN’NY FIFIDIANANA NY FILOHA RAVALOMANANA MARC – MyDago.com aime Madagascar
TSY MAINTSY TONGANTSIKA ETO ALOHAN’NY FIFIDIANANA NY FILOHA RAVALOMANANA MARC
Nitohy androany teny amin’ny kianjan’ny Magro Behoririka ny hetsiky ny vahoaka mpomba ny Ankolafy Ravalomanana. NIsy hatrany ny lahateny nifandimbiasana nataon’ireo mpitarika tonga teny an-toerana. Anisan’ny nandray fitenenana ny Ct Ravelonanosy Mamy tiana. Nambarany fa efa niteny iny voalazany iny ny ambasadaoro frantsay tamin’ny voalohany . Taty aroriana hoy izy dia niala tsiny ary izao indray dia niverina. Araka ny nifanarahana tao Bel’air hoy Mamy Tiana dia amin’ny herinandro ambony isika dia hanao « rappel à l’ordre », fangatahana interpellation. Hisy ny hetsika ataontsika amin’izany ampahatsiahivana fa tsy mbola mitsahatra ny tolona nataon’ny Mdrm tamin’ny 47 ary asehontsika fa tsy mety ny politika frantsay. Hisy hetsika lehibe hoy izy manomboka amin’ny alatsinainy. Asehontsika amin’ny mpitondra frantsay fa misy zavatra ataony tsy mandeha amin’ny laoniny eto. Firenena manana ny fiandrianany hoy izy i Madagasikara. Momba ny fifidianana dia nambarany fa betsaka ny fanontaniana mipetraka ny amin’io. Ny kandidan’ny Ankolafy Ravalomanana hoy Mamy Tiana dia ny filoha Ravalomanana Marc tonga eto an-tanindrazany. Izy ihany no milaza ny kandida. Efa voalazan’ny tondrozotra hoyizy ao amin’ny andininy faha 20 fa tsy maintsy tonga eto izy tsy misy fepetra. Tsy maintsy tanterahina avokoa izay voalazan’ny tondrozotra. Ny fitoniana hoy izy dia ny filoha Ravalomanana Marc tonga eto, mivoaka ny gadra politika, misokatra ny radio nakatona. Raha mbola misy kajikajy politika hoy Mamy Tiana dia tsy haharitra herintaona na roa taona izay voafidy eo dia hisy krizy vaovao indray. Tsy maintsy tongantsika eto alohan’ny fifidiananan ny filoha Ravalomanana Marc.
FILOHA RAVALOMANANA MARC : TSY HISY FIFIDIANANA IZANY ETO RAHA TSY TONGA ANY IZAHAY
NAIKA ELIANA : TSY MAINTSY TANTERAHINA NY TONDROZOTRA ARY TONGA NY FILOHA RAVALOMANANA MARC VAO MISY FIFIDIANANA EKEN’NY REHETRA ETO
Auteur Solo Razafy*Publié le 15 mars 2013 15 mars 2013 Catégories Politique
1 réflexion sur « TSY MAINTSY TONGANTSIKA ETO ALOHAN’NY FIFIDIANANA NY FILOHA RAVALOMANANA MARC »
16 mars 2013 à 10 h 21 min
Aleo tsy maika hampody ny filoha raha mbola toy izao foana ihany ny fomba fijery sy fiasa: toa tsy misy maharakatra fa tantanan’ny frantsay lava izao @ fanodikodinandry-zareo ny anarana sy fomba hanalikana ny malagsy fotsiny.Mazava be anie ny fandrahonana ataon’io mitonona ho ambasadaoro frantsay io fa efa handihizandry zareo antam-pondoha dia mbola mitomany hinono amindry zareo foana ihany!
Précédent Article précédent : Communiqué – « Retour sous conditions » de Mme Lalao Ravalomanana
Suivant Article suivant : VOHIBATO, ALAKAMISY ITENINA : « tsy ho voavidy vola izany ny fitiavako ny tanindrazako » hoy NY FILOHA RAVALOMANANA